Excel Formula amin'ny famolavolana fandaharana fanavaozana ara-tsosialy amin'ny Andron'ny herinandro | Martech Zone
Ny iray amin'ireo mpanjifa miara-miasa aminay dia manana vanim-potoana tsy miova amin'ny orinasany. Noho io antony io dia tianay ny mandahatra mialoha ny fotoana mialoha ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy mba tsy hatahoran'izy ireo ny hamely ireo daty sy ora voatondro.
Ny ankamaroan'ny sehatra famoahana haino aman-jery sosialy dia manolotra fahafaha-mampakatra betsaka indrindra handaminana ny kalandrie media sosialinao. Koa satria Agorapulse dia mpanohana an'i Martech Zone, Hotarihiko ianao mandritra ny fizotr'izy ireo. Ho fandinihana azy ireo, manome ihany koa izy ireo malefaka rehefa mampakatra ny rakitra fisarahana komana misaraka (CSV) satria azonao atao ny mametraka ny tsanganana amin'ny rakitrao fa tsy manana kaody matevina.
Rehefa manangana ny fisie CSV isika dia tsy te-hamafa bitsika 7 andro isan-kerinandro amin'ny fotoana mitovy. Tianay ny hametraka ny CSV amin'ny andro fiasana manokana sy fotoana tsy ampoizina isa-maraina. Amin'ity ohatra ity dia hameno ny takelaka amin'ny fanavaozana ny media sosialy ho an'ny maraina Alatsinainy, Alarobia ary Zoma aho.
Excel Formula ho an'ny fanaovana kajy ny andro amin'ny herinandro
Aza hadino ny manomboka amin'ny Excel Spreadsheet, fa tsy rakitra CSV, satria hampiasa izahay Formula Excel ary avy eo aondraho ny rakitra amin'ny endrika CSV. Tsotra kely ny tsangako: Date, Text, ary URL. Ao amin'ny sela A2, ny fikajiako dia ny mitady ny alatsinainy voalohany aorian'ny anio. Izaho koa dia hametraka ny ora hatramin'ny 8 maraina.
Ity formula ity dia mitsambikina amin'ny herinandro ambony ary avy eo mahita ny alatsinainy amin'ny herinandro. Ao amin'ny cell A3, mila manampy 2 andro fotsiny amin'ny daty A2 aho hahazoana ny datin'ny alarobia:
Ankehitriny, ao amin'ny sela A4, hanampy 4 andro aho mba hahazoako ny datin'ny zoma:
Mbola tsy vita isika. Ao amin'ny Excel, azontsika atao ny misintona sela maromaro ho an'i Excel mba hikajiana formulazy ho azy amin'ny laharana manaraka. Ny laharanay 3 manaraka dia hanampy herinandro fotsiny ireo sahanay nisaina etsy ambony. A5, A6, A7, A8, A9, ary A10 dia tsirairay avy:
Ankehitriny, azonao atao fotsiny ny misintona ny raikipohy ho an'ny fanavaozana betsaka araka izay tianao ampidirina.
Random Times ao amin'ny Excel
Ankehitriny rehefa azontsika ny daty napetraka rehetra dia mety tsy te-hamoaka amin'ny fotoana marina isika. Noho izany, hampiditra tsanganana eo akaikin'ny tsanganana A aho ary avy eo ao amin'ny tsanganana B, hanampy trano sy minitra maromaro ho an'ny fotoana ao amin'ny tsanganana A aho, fa tsy hihoatra ny mitataovovonana:
Sintomy fotsiny avy eo amin'ny B2 ny formula:
Eo isika! Ankehitriny isika dia manana tsanganana ny Alatsinainy, Alarobia ary Zoma andro miaraka amina fotoana tsy ampoizina eo anelanelan'ny 8 maraina sy antoandro. Aza hadino ny mamonjy ny Excel Spreadsheet (AS Excel) ankehitriny. Azontsika atao ny miverina amin'ity takelaka ity isaky ny telovolana na isan-taona rehefa manomana ireo fanavaozana ara-tsosialy manaraka.
Mandika soatoavina ao amin'ny Excel
Select Manova> Mandika avy amin'ny Menu Excel anao ary sokafy ny Lembam-baravarana Excel vaovao - ity no lembalembana aondrinay mankany CSV. Aza atao apetaka anefa ny tsanganana. Raha manao izany ianao, ny endrika dia apetaka fa tsy ny tena sanda. Ao amin'ny takelaka vaovao, Select Edit> Mametaka manokana:
Manome varavarankely fifampiresahana ahafahanao misafidy soatoavina:
Nametaka nomerao tamin'ny desimaly ve izy? Tsy misy ahiahy - mila mamolavola ny tsanganana ho daty sy ora fotsiny ianao.
Ary ankehitriny azonao ny angona ilainao! Afaka mameno ireo fanavaozana ara-tsosialy ianao izao ary manampy rohy mihitsy aza. Mizotra mankany File> Save As ary hifantina Soatoavina sasarina kôma (.csv) toa anao File Format. Izany no ho mampakatra betsaka rakitra izay azonao ampidirina ao amin'ny rafitry ny fanontana haino aman-jery sosialy.
Raha mampiasa ianao Agorapulse, azonao atao izao ny mampiasa ny endri-javatra Bulk Upload mba hampakaranao sy handaminanao ireo fanavaozana ara-tsosialy anao
Ahoana ny fomba fampidinana marobe ny fanavaozana ara-tsosialy ao Agorapulse
Fampahafantarana: izaho dia Agorapulse Masoivoho.
Tags: agorapulsemampakatra betsakaExcelexcel calcul androformel excelfotoana fohy excelfandaharana bitsika
Ahoana ny fomba hanatsarana ny orinasanao, ny tranokalanao ary ny fampiharana anao amin'ny fikarohana an'i Apple
GTranslate: Plugin fandikana WordPress tsotra mampiasa Google Translate
15 Nov 2020 tamin'ny 2:01 PM
Misaotra an'ireo torohevitra tsara! Miaraka amin'ireo fitaovana fandaharam-potoana rehetra any, tsy ho nieritreritra ny hampiasa Excel fotsiny aho.